Ny Fanangonana Ny Vehivavy
Asabotsy 5 Martsa 2022
Ny Fanangonana Ny Vehivavy Ny famolavolana fanangonana Hybrid Beauty dia ny fampiasana fahatapahana ho toy ny mekanika velona. Ny endri-javatra mahafatifaty hita dia tadiny, ruffle ary voninkazo, ary averin'ireo teknika fako sy couture nentim-paharazana izy ireo. Io fomba teknika couture taloha io amin'ny taeo maoderina, izay romantika, maizina, nefa koa maharitra. Ny fizotran'ny drafitra Hybrid Beauty dia mamporisika ny faharetana hamorona famolavolana maharitra.
Ny Vavahadin-Tsivalana Ho Avy Any An-Tanàn-Dàlamby Lalamby Iray
Zoma 4 Martsa 2022
Ny Vavahadin-Tsivalana Ho Avy Any An-Tanàn-Dàlamby Lalamby Iray Light Portal dia planina an'ny Yibin Highspeed Rail City. Ny fanavaozana ny fomba fiainana dia manoro hevitra ny taona rehetra mandritra ny taona. Manaraka eo amin'ny Yibin High Speed Rail Station izay niasa hatramin'ny Jona 2019, ny Yibin Greenland Center dia ahitana ny Twin Towers mifangaro 160m avo mifangaro mahery vaika mampiditra ny maritrano sy ny natiora miaraka amin'ny fehezan-dalambe 1km lava. Yibin dia manana tantara nandritra ny 4000 taona mahery, nanangona fahendrena sy kolontsaina sahala amin'ny fahatsapana ao anaty renirano izay nanamarika ny fivoaran'ny Yibin. Ny Twin Towers dia miasa ho vavahadin-jiro maivana hitarika ny mpitsidika ary ho mari-pahaizana ho an'ny mpivory hivory.
Klinika Ho An'ny Aretin-Tsaina
Alakamisy 3 Martsa 2022
Klinika Ho An'ny Aretin-Tsaina Clinique ii dia toeram-pitsaboana orthodontic tsy miankina ho an'ny mpitarika ny hevitra sy ny luminary izay mampihatra sy mikaroka ireo teknika sy fitaovana mandroso indrindra amin'ny fifehezany. Ny Architects dia nahita hevitra momba ny implant mifototra amin'ny fampiasana orthodontic mahazatra amin'ny fitaovana ara-pitsaboana avo lenta ho toy ny foto-kevitra famolavolana mandritra ny habakabaka. Ny rindrina anatiny sy ny fanaka dia mikambana amin'ny akorandriaka fotsy miaraka amin'ny akorandrialy mavo izay ampidirina ny teknolojia ara-pitsaboana.
Alarobia 2 Martsa 2022
Megalopolis X Shenzhen Super Headquarter Ny Megalopolis X no ho foibe vaovao any afovoan-tanàna lehibe kokoa, akaikin'ny sisin-tany eo anelanelan'i Hong Kong sy Shenzhen. Ny drafitry ny tompona dia mampiditra ny maritrano amin'ny tamba-jotra an-tongotra sy ny zaridainam-panjakana ary ny sehatry ny daholobe. Ambony sy ambanin'ny tambajotram-pitaterana an-tany dia amboarina amin'ny fampakarana ny fifandraisana ao an-tanàna. Ny tambajotra fotodrafitrasa maharitra eto ambany dia hanome rafitra ho an'ny fanatsorana ny distrika sy fikarakarana fako mandeha ho azy amin'ny fomba tsy misy tomika. Ny tanjona dia ny hanangana rafi-pandrafetana drafitra famoronana hoe ahoana no hananganana ny tanàna amin'ny ho avy.
Panaka Ny Mpanantona Lolo
Talata 1 Martsa 2022
Panaka Ny Mpanantona Lolo Ny fakan'ny lolo dia nahazo ny anarany raha mitovy amin'ny endriky ny lolo lolo manidina. Fanaka minimalistic azo afangaro amin'ny fomba mety izy ireo noho ny famolavolana singa mampisaraka.Users dia afaka manangona haingana ny hanger amin'ny alàlan'ny tanana mitanjaka. Rehefa ilaina ny mifindra dia azo aleha mora ny mitondra a rehefa voaroaka. Dingana roa fotsiny ny fametrahana: 1.stack roa miaraka miaraka hanamboarana X; ary manamboara ireo rindrina vita amin'ny diamondra amin'ny lafiny tsirairay. 2. afidiho ny tapa-kaody amin'ny alàlan'ny rindrina vita amin'ny diamondra voapetaka amin'ny andaniny roa mba hihazonana ny banga
Ny Foibe Ara-Kolontsaina Medieval
Alatsinainy 28 Febroary 2022
Ny Foibe Ara-Kolontsaina Medieval Medieval Rethink dia valin-kafatra amin'ny vaomiera tsy miankina hanorina ivontoerana ara-kolotsaina ho an'ny vohitra kely tsy voamarina ao amin'ny faritany Guangdong, izay efa tamin'ny 900 taona lasa teo ho an'ny Dynasty Song. Fivoarana efatra, 7000 metatra mirefy afovoany dia miorina manodidina ny vatolampy tranainy fantatra amin'ny anarana hoe Ding Qi Stone, mariky ny fiandohan'ny vohitra. Ny foto-kevitry ny tetik'asa dia mifototra amin'ny fampisehoana ny tantara sy ny kolontsain'ny tanàna taloha raha mampifandray ny taloha sy ny vaovao. Ny Centre Cultural dia mitsangana ho famerenana indray ny vohitra taloha ary fanovana ho lasa maritrano ankehitriny.
Haezer Rakitsary Rakitsary Alahady 3 Jolay
Up Ny Fanangonana Efitrano Fandroana Asabotsy 2 Jolay
Il Mosnel QdE 2012 Ny Fonon-Divay Misy Fonosana Sy Ny Fonosana Zoma 1 Jolay
Ny Fanangonana Ny Vehivavy Ny Vavahadin-Tsivalana Ho Avy Any An-Tanàn-Dàlamby Lalamby Iray Klinika Ho An'ny Aretin-Tsaina Megalopolis X Shenzhen Super Headquarter Panaka Ny Mpanantona Lolo Ny Foibe Ara-Kolontsaina Medieval